Tom Hanks Yevacheche Nyaya yeNhau uye Untold Biography Chokwadi
musha nyika dzakabatana Hollywood nyeredzi Tom Hanks Yevadiki Nhau uye Untold Biography Chokwadi
CB inotaura Nhoroondo Yese yeAmerican Celebrity ane zita rezita “Baba vaAmerica". Yedu Tom Hanks Yehucheche Nyaya uyezve Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva nezve ake anotungamira mabasa mumafirimu anozivikanwa. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Tom Hanks 'biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Tom Hanks Nyaya Yevechidiki:
Kutanga kuenda, Tom Hanks vabereki vakamupa zita rakazara Thomas Jeffrey Hanks mushure mekuzvarwa kwake.
Tom Hanks akaberekwa musi we 9th waChikunguru 1956 kuna amai vake, Janet Marylyn Frager, uye baba, Amos Mefford Hanks muguta reConcord, California.
Tom Hanks akarererwa mumhuri yepakati-yemhuri kumashure yaishandiswa nababa vake vaishanda nesimba vaibika vanofamba uye muridzi weresitorendi. Ipo baba vake vachiona kuburikidza nekumhanya kweresitorendi yake, amai vaTom vaishanda sahweta. Pamwe chete vakachengeta mhuri yavo ichienda.
Tom Hanks Mhuri Dzinobva:
Zvichida vateveri vazhinji vanofunga kuti Tom Hanks ndiAmerican kwese. Asi Waizviziva?… Mutambi ane mukurumbira ane mhuri yake kwete chete kubva kuUS, asiwo, England nePortugal. Tom Hanks akamboratidza kuti baba vake ndevemadzitateguru echiChirungu apo amai vake vari vechiPutukezi. Nekureva, zvinoreva kuti Tom Hanks mhuri ine yeChirungu / Portuguese mhuri yemhuri inoteedzera kumadzitateguru avo.
Tom Hanks Makore Ekutanga:
Kukura muCalifornia, Tom pane imwe nguva aive ainetseka kwehudiki ruzivo pamwe chete nevanun'una vake- Jim, Larry naSandra. Tom Hanks mumakore ake ekutanga (zera 4) akapupurira hukama huri kuderera pakati pevabereki vake. Zvinhu zvakawedzera kushata, iko kukura kwakatungamira kuna Tom Hanks vabereki vachipatsanura kubva kune mumwe nemumwe. Sandra Hanks (hanzvadzi yake mukuru) naLarry Hanks (mukoma wake mukuru) vakaenda nababa vavo. Tom Hanks 'munin'ina wekupedzisira Jim akasara naamai vavo muRed Bluff, California.
Semukomana mudiki, Tom akapupurira mhuri yake yakatama kwazvo paakange achiri mwana. Pazera ramakore gumi, mudiki uyu aigara mudzimba gumi dzakasiyana mumaguta mashanu akasiyana eUS. Iye mukomana aishingairira aive akanaka chaizvo nekufamba kwemhuri.
Tom Hanks Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Tom aive nedzidzo yake yekutanga paJohn Swett Elementary School ikozvino yakavharwa muMartinez, California. Akazotamira kuBret Harte Junior High kwaakapedza kudzidza muna 1971. Mushure memajuniors, Tom akaenda kuSkyline High School kuOakland, California. Yaive kusekondari Tom aifarira akawana rudo rwake rwekuita.
Paaive kusekondari, Tom ane nyeredzi mune zvigadzirwa zvechikoro, achitora makirasi emadhirama naRawley Farnsworth (mudzidzisi wake weSkyline High School). Akaenderera zvakare kubatana neboka renharaunda rakavakirwa paKereke yekutanga Sungano. Munguva yezororo Tom aigara nemhuri kubva kuchechi. Akazvitsigira nekushanda sebhero (hotera remahotera) kuOakland Hilton Hotel. Paaibatsira vatengesi nemachira avo pavaitarisa mukati kana kunze kwehotera, Tom achiri mudiki akawana nguva yekuita dhiraivhu paaive kuSkyline high chikoro.
Tom Hanks Yekutanga Basa Rehupenyu:
Mushure mekupedza chikoro kubva kuSkyline High School muna 1974, Toms akaenda kuChabot College, muHayward. Ikoko, akatora makirasi ane hukama nehukama hwake seOral Interpretation, Performance yeDrame, uye zvidzidzo muShakespeare. Achiita zvakanaka muhunyanzvi hwake mhanza Tom akazviisa kuCalifornia State University, Sacramento mushure memakore maviri kuChabot College.
Achitaura nezvepamusoro-soro rebasa rake rekuzvitsaurira iro rakamuumba kuti ave iyo Legend yaari nhasi, Tom Hanks akamboti;
“Muhudiki hwangu, ndaipedza nguva yakawanda ndichienda kunotamba. Ini handingashinga kutora madhiri neni. Ndaingotyaira kuenda kuimba yemitambo, ndichizvitengera tikiti, ndogara pachigaro ndoverenga chirongwa, ndobva ndatanga kutamba. Ndakapedza nguva yakawanda ndakadaro, ndichiona Brecht, Tennessee Williams, Ibsen, nezvose izvozvo.
Paaidzidza hunyanzvi hwemitambo muyunivhesiti, Tom akazove mudzidzi kuGreat Lakes Theatre Festival muCleveland, Ohio. Yake yemakore matatu ekudzidzira basa yakafukidza ese makuru makuru emitambo iyo inosanganisira kuita mune dzakasiyana zvigadzirwa zve Shakespeare mitambo. Akapedza nguva yake yechando achishanda kuseri kwekambani yemitambo yemitambo muSacramento.
VERENGA Bhiri reCosby reChikoro Chemwana Plus Untold Biography Chokwadi
Tom Hanks Mugwagwa weMukurumbira Nyaya:
Waizviziva here?… Rwendo rwaTom Hanks mukurumbira rwakatanga nesarudzo yake yekusiya koreji. Mushure mekuita sarudzo, akafunga kuenda kuNew York City uko kwaakadhirowa mafirimu uye terevhizheni muna 1979. Pakazosvika 1980, Tom akange atozvitorera nzvimbo yekutungamira muABC sitcom, Bosom Buddies. Panguva ino, vabereki vaTom Hanks vaisakwanisa kuzvikudza pamusoro pake.
Mutsetse wekutamba weBosomom Buddies yaakaratidza naPeter Scolari ndiyo yakachinja shanduko mune rake basa. Iwo akateedzana kubva 1980 kusvika 1982. Kufunga kwake kusiya chikoroji hakuna kumukundikana sezvo basa rake rekuita rakabudirira kwazvo panguva iyoyo. Pakazosvika pakati pemakore makumi masere, Tom akafarira rimwe basa rekutungamira mumafirimu makuru imwe yacho yaive Splash.
Tom Hanks Kukwira Kumukurumbira Nyaya:
Pamberi pekutanga kwema1900, chiitiko chaTom muindasitiri yeHollywood chakamuona achive mugadziri, munyori uye director wemamuvhi. Rasher than crumble, ngano Tom akaenda kubva pasimba kusvika simba kusvika kwake kwenyonganiso kusimuka mumakore gumi uye zvichingoenda. Panguva ino, vazhinji vemhuri yaTom Hanks vakapinda vachiita zvese zvekutenda kwaari.
Panguva yekunyora, Tom Hanks anoverengerwa seyechishanu-yepamusoro-pese-nguva bhokisi bhokisi nyeredzi muNorth America yese. Ane huwandu hwakazara hunosvika kumadhora 4.9 mabhiriyoni kuNorth American box office. Muchokwadi, vezvenhau vakambove nazvo kuti iye anowana avhareji yemadhora 100.8 mamirioni pafirimu. Sei aisadaro?… Kunyange Chinzvimbo yakapa Tom Hanks iyo Chinzvimbo cheGoridhe sezvo iye zvino achivhoterwa # 1 pakati "Ivo Vatambi Vakanaka muFirimu Nhoroondo"
Tom Hanks Hukama Hupenyu:
Tom akaroora kaviri. Muchikamu chino, tinokuunzira zvakawanda nezvehukama hwake hwekare uye hwazvino. Chii chaunoda kuziva nezvewanano yake yakundikana uye imwe yakave yakabudirira kwazvo.
Kuroora kwaHank naSamantha Lewes (1978-1987):
Tom akaroora muAmerican mutambi Samantha Lewes mugore 1978. Samantha Lewes akaberekwa saSusan Jane Dillingham musi wa 29th waNovember 1952 muCalifornia, United States.
SaTom, Samantha zvakare akateedzera basa rekuita. Munguva yekupedzisira '80s, hukama hwavo akatanga kuderera. Zvinhu zvakatanga kuparara uye zvakatanga kuvava zvekuti vaviri mapato aifanira kutungamira kurambana.
Makore mashoma gare gare, hupenyu hwaSamantha hwakatora kusuruvara paakaonekwa aine gomarara repfupa. Akarwa nechirwere chinouraya kwemakore akati wandei asati asiya mweya muna 2002. Asati afa, aive nevana vaviri naHanks.
Vana vaTom Hank naSamantha Lewes:
Ndiye dangwe mwanakomana wemutambi Tom Hanks akazvarwa musi we24th waNovember 1977. Sababa vake, iye mutambi weAmerica, mugadziri, uye director. Colin anozivikanwa nekutamba mumafirimu akaita seOrange County, King Kong nezvimwe.
Tom Hanks Mwanakomana wekutanga, Colin Lewes Hanks.
Ndiye wekutanga uye mwanasikana wega waTom Hanks naSamantha. Elizabeth Anne Hanks akazvarwa musi wegumi nemana waMay 17, muLos Angeles, California. Kufanana nevabereki vake, Erizabheti mutambi anozivikanwa neForrest Gump (1982), Icho Chinhu Chaunoita! (1994) uye Anchoraged (1996). Heuno Tom Hanks akafananidzirwa padivi pewaKe wekutanga uye Daugther chete, Elizabeth.
Kuroora kwaTom Hank naRita Wilson (1988 -):
Paunenge uchigadzira runyorwa rwemichato yakabudirira kwazvo, yako runyorwa haigone kupedzwa pasina kutaura Tom Hanks nemukadzi wake akanaka mutambi Rita Wilson.
Loverboy Tom akasangana nerudo rwake, Rita Wilson, pane seti yeTV mutambo Bosom Buddies muna 1981. Kuwirirana kwavo panguva yekutora firimu kwakakonzera kusingarambike chemistry. Makore mana mushure meiyo bhaisikopo, Tom naRita vakabatanidzwazve paseti. Panguva ino, ivo vakanyanya kukwezva kune mumwe nemumwe kuti vafuratire manzwiro avo. Pa 30th yaApril 1988, Tom naRita vakasunga banga.
Vasati varoora Rita, Tom akatendeukira kuChechi yeGreek Orthodox, chinamato chaWilson nemhuri yake. Kuroora mukati mechitendero chaikosha kuna Rita nemhuri yake. Loverboy Tom akambundira chikamu chega chega chekutenda kutsva. Paakabvunzwa nezvechakavanzika chake kumuchato wemakore makumi matatu, Tom akapindura;
“Chakavanzika changu kumuchato wangu unofadza kungo roorwa nemukadzi chaiye. Ndakaita rombo rakanaka naRita Wilson. Ndini murume ane rombo rakanaka kupfuura vose ari mupenyu ”
Muchato pakati paTom Hanks naRita Wilson wakakomborerwa nevana vaviri: Ivo Vanosanganisira;
Chet Hanks: Iye ndiye wekutanga mwanakomana nemwana akazvarwa kuna Tom Hanks naRita Wilson. Chet Hanks akaberekwa pazuva re4th yaNyamavhuvhu 1990 muguta reLos Angeles, California. Kufanana nevabereki vake uye vakuru vehafu-hama, Chet zvakare ari kuita. Waizviziva?
Sangana naTom Hanks 'mwanakomana wechipiri, Chet Hanks.
Truman Theodore Hanks: Ndiye wekupedzisira mwanakomana uye mwana akazvarwa kumhuri yaTom Hanks naRita Wilson. Truman akazvarwa pazuva rakatevera Kisimusi- iro 26 zuva raDecember 1995. Sezvinotarisirwa, Truman senge vamwewo vakateedzera tsoka dzevabereki vake uye vakuru vehama. Kunyangwe asiri mukurumbira, akamboita akawanda madiki mabasa mumamuvhi. Truman yakaratidzawo mune zvimwe kushambadzira uye kushambadzira. Sangana naTom Hanks 'mwanakomana wechitatu, Truman.
Tom Hanks Mhuri Yechokwadi:
Muchikamu chino, tinokupa mamwe maonero enhengo dzemhuri dzaTom Hanks kutanga nevabereki vake.
Zvimwe Nezve Tom Hanks Baba: Amos Mefford Hanks akaberekwa musi wechi 4 Kurume 1924 muGlenn, California. Mubiki wepamberi uye muridzi weresitorendi aipedza chikamu cheupenyu hwake hwese achitora basa rake rekudyirwa. Izvi zvakauya mushure menguva pfupi pfupi muUS Navy. Zvinosuruvarisa, Amos Mefford Hanks akashaya musi wa31 Ndira, 1992. Zvishoma zvinozivikanwa kana vabereki vaTom Hanks vakadzokerana baba vake vasati vafa.
Nezve Tom Hanks Mum: Amai vake, Janet Marylyn Hanks Frager akaberekwa musi we 18th waJanuary 1932 kuAlameda County, California. Janet uyo ane mhuri yake anobva kuPutukezi akararama murume wake. Akatanga basa rake seyemakamirira asati atungamira kuburikidza nekutengesa kweukoti. Muna 2016, Tom akazivisa kufa kwamai vake pa Instagram yake.
Zvimwe NezveTom Hanks Vanababa:
Chokwadi, Tom haana kukura pamwe chete nevabereki vake. Muchikamu chino, tinokupa ruzivo nezvevana vatatu vaTom Hank. Zvinosanganisira;
Larry Hanks: Akazvarwa pazuva re26th raNdira 1953, Larry ane makore matatu mukuru kuna Tom mukoma wake. Mwanakomana wekutanga akazvarwa kuna Tom Hanks vabereki. Waizviziva here?… Amos Mefford Hanks anga asiri mumafirimu. Iye ndiAmerican entomologist uye purofesa muDhipatimendi reEntomology, University of Illinois, USA. Pasina kupokana, kutaridzika kwaLarry kunotaura zvakawanda nezve rake basa. Sangana naTom Hanks Mukuru Mukoma, Larry.
2. Sandra Hanks: Kuzvarwa muna 1947 kunoratidza kuti ane makore 9 mukuru pane mukoma wake Tom. Sandra munyori uye blogger. Iye anonakidzwa nehupenyu hwakadzikama mune imwe imba hombe paSeychelles ine imba yakaringana inotarisana neIndian Ocean. Kugara achitaridzika mudiki uye akanaka Sandra anogara achibatana nevanun'una vake nevana kuburikidza neSkype.
3. Jim Hanks: Kuzvarwa pazuva rechigumi nemashanu raJune 15 zvinoreva kuti iye ari makore mashanu mudiki kuna Tom mukoma wake. Jim akateedzera tsoka dza mukoma wake wepedyo. Iye ari mune imwe- yeAmerican mutambi, inzwi mutambi, director, mugadziri, sinematologist, uye kamera inoshanda.
Jim akatamba zvidiki zvidiki zvinoitwa mumafirimu. Akaitazve vashanyi kuonekera paterevhizheni nguva zhinji vachiva vanotsiva vachiita basa remanzwi kune mukoma wake Tom Hanks.
Pamusoro peTom Hanks Vezera:
Waizviziva here?… Vanasekuru vababa vaTom ndiErnest Hanks naGladys Ball. Sekuru vake amai nasekuru vaive Clarence Frager naElexio Rose. Chekupedzisira, Tom Hanks ane vazukuru vaviri vanoenda nemazita; Olivia Hanks naCharlotte Hanks. Iko hakuna zvinyorwa zve babamunini vaTom nababamunini. Vanun'una vaTom Hanks, babamunini, uye vanababa vachiri kuzivikanwa panguva yekunyora.
Tom Hanks Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Kuziva Tom Hanks Yemunhu Hupenyu kwaizokubatsira iwe kuwana zviri nani mufananidzo wehunhu hwake hwekamera yakaiswa.
Kutanga kuenda, iye mumwe munhu ane shungu kwazvo uye ane hanya. Tom ane hanya zvakanyanya nezvezvinhu zvemhuri uye nemba yake. Iye anonzwira tsitsi muchimiro uye anoda kuchengeta nhengo dzemhuri padhuze naye. Iye zvakare anokwanisa kunzwira tsitsi nekurwadziwa kwevamwe vanhu nekutambura, hunhu hwakasimba hweCancer Zodiac Sign yake.
Waizviziva here?… Iye mugadziri wemufirimu uye director ane zvido nezvido zvekutamba zvinotenderera achitarisa nhabvu nekushandisa yakawanda yakawanda nguva yemhuri nemhuri yake yepedyo.
Tom Hanks Maitiro ehupenyu:
Kutanga kuenda, iye semari inofungidzirwa kukosha $ Miriyoni 350 Sezvo panguva yekunyora, kumuita imwe yeanonyanya kubhuroka nyeredzi muHollywood indasitiri. Uku ndiko kunongedzera kumararamiro ake ekunze.
Iye anodyisa yemhuri yeHanks anoita mari yakakwana yaanoshandisa kurarama hupenyu hwekunze. Achitaura nezvemararamiro ake ekunze, Hanks ane muunganidzwa wedzimba dzinokwana kuita madhora miriyoni gumi nemazana mashanu. Dzimba dzake dzinoshamisa dzinowanikwa muLos Angeles zuva rinofukidza nzvimbo yemamita mazana matanhatu nemakumi matanhatu nemakumi mashanu ematanho.
Imwe nharaunda yehupenyu hwaTom Hanks hwekunze uri munzvimbo yeunganidzwa wake wemotokari. Tom Hanks ane yake Toyota RAV4 EV, yekutanga kugadzirwa kwe AC Propulsion eBox mota yemagetsi. Iye zvakare ane Toyota Prius, Chevrolet Tahoe. Kwazvino kwazvo panguva yekunyora, iye akangotenga Mercedes Benz S -kirasi.
Tom Hanks Chokwadi:
Muchikamu chino, tinokuunzira ruzivo rwakawedzerwa paTom Hanks Chokwadi iyo inogona kunge iri shoma-inozivikanwa kwauri.
Aida kuve Nyenyedzi: Semwana mudiki, Tom mudiki pakutanga aida kuve iye muchadenga. Iye anga asiri kubudirira nekuti aive asina hunyanzvi hwe math. Sezvo rombo rakanaka raizove naro, hope dzake neimwe nzira dzakazadzikiswa. Waizviziva here? Zita rekuti Tom Hanks 'asteroid inonzi "12818 Tom Hanks" yakawanikwa musi wa13 Kubvumbi 1996 nemunyanzvi wezvenyeredzi Joseph L. Montan. Kunyangwe zvakadaro kusiya chikoro, vabereki vaTom Hanks zvechokwadi vangadada naye.
Tom Hanks ane hukama naAbraham Lincoln: Waizviziva here?… Tom Hanks ihama yechitatu, chizvarwa chechina chakabviswa, chevaimbova Mutungamiri weU.S. Zvinorevei kuti “zvizvarwa zvina zvinobviswa? Muchidimbu, Tom Hanks naAbraham Lincoln imhuri uye hama chaidzo.
Chitendero: Asati aberekwa, mhuri yaTom Hanks yakatora chinamato chechiKristu chechiCatholic neMormon. Sekureva kwe WomansDay, Hanks akambozvitsanangura se "muvhangeri anotora Bhaibheri" mumakore ake ekuyaruka. Sezvatsanangurwa pakutanga, akachinja kuita rakasiyana bazi rechitendero chechiKristu mushure mekuroora naRita Wilson. Iye zvino atora iko kutenda kweGreek Orthodox.
Tattoos: Isu tese tinoziva Chitato tsika inozivikanwa chaizvo muHollywood indasitiri yanhasi. Hollywood nyeredzi vanowanzoishandisa kuonesa chitendero chavo kana vanhu kana zvinhu zvavanoda. Tom Hanks panguva yekunyora ndeye tattoo-isina. Kunyangwe, vashoma vevateveri vake vane mufananidzo wake wakatemwa pamiviri yavo. Isu takazviona izvo zve Obama, Kanye, Cardi B uye Freeman nezvimwewo 1.83m kureba muhondo ndewechikwata chevateereri vasingayemuri kushongedzwa kwemuviri.
Kusvuta uye Kunwa: Senge panguva yekunyora, Tom Hanks haapute fodya. Zvisinei, akaonekwa achinwa nguva nenguva.
CHOKWADI KUTI: Thanks for readinguedu Tom Hanks Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!